खेलकुद Archives - Mero Khabar Nepal
आज मंगलबार, मंङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको फोटोलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ असार २४ गते मंङ्गलबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।। #जयगणेश_भगवान
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पढाई लेखाईमा मन जानेछ भने प्रतिष्पर्धिहरु तपाईको क्षमता देखेर आफै पछाडि हट्नेछन् । न्यायिक निर्णयहरुबाट फैसला तपाई आफ्नै पक्षमा हुनेछन् भने सत्रुहरुलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा नया प्रविधिको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । आफन्त घर परिवार तथा मामा मावली पक्षबाट भनेजस्तो सहयोग तथा समर्थन पाईनेछ । मन परेको मानिस सँग रमाईलो यात्रामा निस्कन सकिनेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) तपाईको बौद्धिकतालाई सबैले सम्मान गर्नेछन् भने नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत खोजिमुलक काम गर्न सकिनेछ । शिक्षा क्षेत्र जस्तै स्कुल कलेज तथा यस्तै सस्थासँग सम्बन्धित कामहरुबाट मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने सकिनेछ । चिठ्ठा तथा उपहार प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहेकोछ भने माया प्रेममा निजिक
झै-झगडा गर्नु पनि फाईदाजनक !
घरमा बालबालिका आपसमा झगडा गर्दा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? पक्कै पनि बालबालिकालाई गाली गर्ने, छुट्याउने गर्नुहुन्छ होला तर बालबालिकाको सानो झगडा उनीहरूकै लागि फाइदाजनक हुने चिकित्सक बताउँछन् । बाल्यकालमा बच्चाहरू झगडा गर्छन् भने त्यसलाई धेरै हदसम्म छुट दिएकै राम्रो हुने पाटन विज्ञान प्रतिष्ठानका मानसिक रोग विभागका प्रमुख डा. रवि शाक्यले बताए । उनले बालबालिकाको सानोतिनो झगडाले रचनात्मक हुन मद्दत गर्ने जानकारी दिए । डा. शाक्य भन्छन्, “एक बच्चाले के सामान लियो, त्यही अर्कोलाई पनि चाहिन्छ, त्यसैमा झगडा हुन्छ, रुन्छ तर त्यही झगडाले अर्को बच्चाले धेरै ज्ञान प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । दाजु अथवा दिदीले गरेको काम या पढाइले सानो बालबालिकाले पनि धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छ भने विभिन्न रचनात्मक काम पनि गरिरहेको हुन्छ । ” बालशिक्षाका विशेषज्ञ कुमुद भट्ट भन्छिन्, “बालब
मौसमविद् भन्छन् अझै केहि दिन मनसुन सक्रिय हुँदैन, यस्तो छ कारण
काठमाडौँ / असार तेस्रो साता भइसक्दा पनि अझै मनसुन सक्रिय हुन सकेको छैन् । न्यूनचापिय रेखा मध्य भारतमै रहेकाले मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुन नसकेकोे जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुन प्रवेश गरिसके पनि केही दिन सक्रिय र केही दिन कमजोर हुने क्रम चलिरहने महाशाखाका मौसमविद् विभूति पौखरेलले बताउनुभयो । मनसुन ट्र«स्ट भारतको मध्य भू–भागमै रहेको छ । “उक्त ट्रस्ट विस्तारै नेपालसम्म आइपुग्न तीन–चार दिन लाग्ने छ”, मौसविद् पोखरेलले भन्नुभयो । जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वनुमान जारी गदै आज देशका पश्चिमी भू–भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । आइतबार देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ । सोमबार देशैभरी आंशिकदेखि सामान्य बद्ली रही एक÷दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्ष
अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि पुँजिगत तर्फ १६ करोड ५४ लाख ३७ हजार ८ सय २६ रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । आज भएको छत्रदेव गाउँपालिकाको गाउँ सभाको बैठकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तुल्सादेवी श्रेष्ठले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।प्रस्तुत बजेटमा खेलकुद तथा मनोरञ्जनको लागि एकमुष्ट ४६ लाख २५ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमा भनिएको छ “खेलकुद तथा मनोरञ्जन अन्तरगत विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता, वडा स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता साथै खेलकुद व्यवस्थापन समेतको लागि रु. ४६ लाख २५ हजार विनियोजन गरेकी छु ।” त्यस्तै बजेटमा छत्रदेव गाउँपालिका वडा न. ५ रातापोखरामा निर्माणाधीन क्रीकेट मैदान सम्पन्नको चरणमा रहेको जानकारी गराइएको थियो ।
मुम्बई – बलिउडका कलाकारले आफूलाई फिट राख्न केसम्म गर्दैनन् ? कतिले त ट्रान्सफर्मेसन पनि गरेको समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ । सोनाक्षी सिन्हाले पनि आफूलाई नायिका बनाउन कडा मेहनत गरेकी थिइन् । शुरुमा यी नायिका ९० किलोकी थिइन् । पछि उनले पहिलो फिल्मका लागि झण्डै ३० किलो तौल घटाएकी थिइन् ।जसकारण पहिलो फिल्म देखेर कैयन् फिल्म दर्शक उनका फ्यान भएका थिए । सोनाक्षी सिन्हाले आफूलाई स्लिम राख्न कडा मेहनत गरेकी थिइन् । शत्रुधन सिन्हाकी छोरी सोनाक्षीले ३२ औँ जन्मदिन मनाएकी छिन् । कस्टुम डिजाइनरबाट आफ्नो करिअर थालिएकी सोनाक्षीले फिल्मबाट अफर पाएकी छिन् । सन् २०१० मा सलमान खानका साथ पहिलोपटक फिल्म ‘दबंग’ बाट फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी सोनाक्षी फिल्म रिलिजपछि एकाएक चर्चामा आइन् । सोनाक्षीले ‘दबंग’ बाट बेस्ट फिमेल डेब्यु विधामा फिल्मफेअर अवार्ड पनि जितिन् । उनले अहिलेसम्म १७ भन्दा पनि बढी फिल्म
Tweet काठमान्डाैं / चितवनमा कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले केही दिनअघि चितवनमा रंगशाला निर्माणस्थलमा भएका घटनाका बारेमा आफूहरुले गरेको टिप्पणीप्रति माफी मागेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सुरु गरेका उनले निर्माणस्थलको बार भत्किएपछि आफूहरुबाट भएको टिप्पणीले कसैलाई चोट पुगेको भए माफी मागेका हुन् । आइतबार फेसबुकमा अपिल पोष्ट गर्दै उनले भनेका छन् ‘हामीले आक्रोशमा आएर अञ्जानमा केही गलत बोलेको भए वा कर्सैमाथि ठोस पुगेको भएमा हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।’ रंगशाला निर्माणस्थलमा स्थानीयले डोजर लगाएर बार भत्काएपछि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको तर्फबाट सार्वजनिक भिडियोमा स्थानीयप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको थियो । त्यसको सार्वजनिक रुपमा विरोध पनि भएको थियो । अन्य समाचार, लिवर अर्थात् कलेजोको सम्पूर्ण फोहोर वा खराबीलाई एकपटकमै हटाउने यो गोप्य घरेलु औषधी ! लिवर यानिकी कलेजोले
बैशाख ७ -स्कुल पढ्दा एक जना प्रधानाध्यापकले भनेका थिए संसारमा छोरीले जस्तो निस्वार्थ माया आमाबुवालाई कसैले पनि गर्न सक्दैन जबकी उनी स्वंयम एक पुरुष थिए कसैको छोरा थिए । ती प्रधानाध्यापकले भनेका कुराको सत्यता बेला बेलामा देखिँदै आएको पनि छ । यसको मतलब छोराले आफना अभिभावकलाई माया गर्देनन् भन्ने चाही होईन तर तुलनात्मकरुपमा त्यस्तै देखिन्छ । हो आफना आमा बुवाप्रति छोरीको माया कति हुन्छ भनेर भारतकी एक युवतीले देखाएकीछिन् । जसले आफना बुवालाई लिवर दान गरेकीछिन् । कोलकत्ताकी १९ बर्षीया राखी गुप्ताले लिवरको समस्याबाट ग्रसित बुवालाई आफनो ६५ प्रतिशत लिवर दान गरेकी हुन् । उनको र बुवाको पेट चिरिएको तस्बिर निकै मन छुने छ । बुवालाई लिवर देखिएपछि क्लिक गरिएको उक्त तस्बिरमा आफनो बुवालाई जीवनदान दिएको खुसी उनको मुहारमा प्रस्ट देखिन्छ । उनको उक्त तस्बिर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ । उनले
काठमाडौँ । तिते करेलाको स्वाद तितो हुने हुनाले जो कोहीलाई यो मन नपर्ने सक्छ । तर यसको महत्व थाहा हुनेले यसको प्रयोग दिनहुँ गर्ने गर्देछन् । हाम्रो गाउँठाउँ पाखा भित्तो सबैतिर उत्पादन गर्न सकिने भएकाले तिते करैला जहाँतेही पाउन सकिन्छ । यसको प्रयोग बाट पेटको क्यान्सर र मधुमेह निको हुन्छ भन्दा जोसुकैलाई अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्य साबित भएको छ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ हामीले तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको तिते करैलाको प्रयोग औषधीको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै बैज्ञानिकहरु करैला सेवनबाट पेटको क्यान्सर र मधुमेह कसरी निको पार्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धानमा जुटेका छन् । तिते करैलाको सेवनले इनसुलिनलाई नियमित गर्न सहयोग गर्छ । र इनसुलिन नियमित भएको खण्डमा पेट संबद्ध क्यान्सरमा आराम मिल्छ । जनावरमा गरिएको अनुसन्धानले पनि देखाइसकेको छ कि तिते करैलाको सेवनबाट बोसोको मात्र